बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारबाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय !
December 21, 2020 admin समाचार 1873
१. धेरै कार्बोहाइड्रेट भएको खाद्यपदार्थ त्याग्नुहोस् । चीनी, आलु र चामलमा कार्बोहाइड्रेट बढि हुन्छ । यस्ले बोसोलाई बढाउँछ ।
२. गहँुको रोटि मात्र खानुभन्दा गहुँ, भटमास र चना मिश्रित आटाको रोटि धेरै फाईदाजनक हुन्छ ।
३ दिनहुँ बन्दागोभीको जुस पिउनुहोस् । बन्दागोभीमा बोसो घटाउने गुण हुन्छ । यस्ले शरीरको मेटाबोलिज्म ( शरीरको रासायनिक परिवर्तन हुने प्रक्रिया ) लाई ठिक गर्दछ ।
४.मेवा नियमित रुपमा खानुहोस् । यो हरेक मौसममा पाईन्छ । लामो समयसम्म मेवाको प्रयोग गर्नाले यसबाट कम्मरको बोसो कम हुने हुन्छ ।
५. दही खानाले शरीरको अनावश्यक बोसो घट्दछ । मोहीको प्रयोग दिनको २–३ पटक गर्नुहोस् ।
६. पीपलको धुलो बनाई त्यसलाई कपडाले छान्नुहोस् । यस धुलोलाई हरेक बिहान मोहीसँग खानाले बाहिर निस्केको पेट भित्र पस्दछ ।
७. अमला र बेसारलाई बराबर मात्रामा पिसेर धुलो बनाउनुहोस् । यस धुलोलाई मोहीसँग खानुहोस् । यसबाट कम्मर पातलो हुन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
४० बर्ष नाघेपछि महिलाहरुमा दोस्रो बैँस किन चढ्छ ?
November 7, 2020 admin समाचार 4262
काठमाडौं । आज पनि धेरै नेपालीहरु विदेशमा रोगजार, अध्ययन वा अन्य कुनै कारणले हराइरहेका छन् । अमेरिका, युरोप र क्यानडाजस्ता देशहरुमा जानका लागि धेरै नै संघर्ष गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा अथक प्रयास पनि सफल हुँदैन
November 26, 2020 admin समाचार 3432
काठमाण्डौ । बेवारिसे लासहरुको अन्तिम दाहासंस्कार गरेकै कारण एउटी साहासी नारीको रुपमा सपना रोका मगरलाई बिबिसीले विश्वका १०० प्रभावशाली महिलाको सूचिमा राखेपछि अहिले उनी चर्चाको शिखरमा छिन् । उनलाई यतिबेला विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा अन्तवार्ता दिन भ्याई
January 19, 2021 admin समाचार 6887
तनहु जिल्ला म्याग्दे गाउपालिका वडा न २ मा आइपुगेका छौ सानो घर यो घरको आगनीमा विबाहको भतेर खादै गरेका अर्ध न’ग्न अबस्थामा बसीरहेका धुबे नाम गरेका एक जना मानिस यति सानो घरमा नि’र्बस्त्र बस्दै आएका
LEX 18 agenda conversation: Job club (486417)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458520)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (121810)